Webtrends na-ebido Nnukwu Nzipụta Data na Webtrends Explore | Martech Zone
Webtrends na-ebupụta Nnukwu Nzipụta Data na Webtrends Explore
Tuesday, February 24, 2015 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Anyị abụla ndị Fans toro ogologo oge Webtrends dị ka onye ndu nchịkọta onye na-eweta ọrụ nke na-arụ nnukwu ọrụ ma nyocha data ma na-enye ndị ahịa ya data nwere ike ime. Ndị otu ngwaahịa na Webtrends na-a payinga ntị na isi ihe mgbu nke ndị na-ere ahịa n'oge a na mwepụta nke onyinye ha kachasị ọhụrụ, Webtrends Nyochaa:
A na-akwadozikwa CMOs nke ọma iji weghara olu na-eto eto, ọsọ na ọtụtụ data.
Ihe kariri uzo ato kwenyere na ha aghaghi itinye ego na ngwa oru ohuru na teknụzụ, ma mepee atumatu ohuru maka ijikwa data buru ibu.
Webtrends Explore bụ ngwa maka nyocha data ad-hoc. Ikpo okwu a na-enyere teknụzụ data Big Big aka ma nwee njirimara ọrụ nke anaghị achọ onye nrụpụta ịjụ ajụjụ ma gosipụta data ịchọrọ iji mee mkpebi kwesịrị ekwesị. Wezụga ịchọghị mmepe ma ọ bụ nsogbu ọ bụla, Webtrends Explore na-enye 3 nnukwu uru:
Ala nke iji iji nweta azịza mgbe ịchọrọ ha.
Nlele anya ọwa nke njem ndị ahịa agbachi.
On-the-fly nkewa na enweghị njedebe.
Nke a ga - eme ka ndị na - azụ ahịa nwee nnukwu ọhụhụ n’ime njem ndị ahịa gafere ngwaọrụ na ọwa, nyere ụlọ ọrụ aka ịnye ahụmịhe ndị ahịa na - agbanwe agbanwe, na - agbanwe agbanwe, ọsọ na arụmọrụ n’oge nyocha nke omume ịntanetị gafee akụkụ ndị ahịa dị iche iche, ma melite nzaghachi iji dozie mkpọsa ma ọ bụ ahụmịhe ndị ahịa n'ihi omume na-atụghị anya ya ma ọ bụ nsogbu ndị a hụrụ.
Njem ndị ahịa aghọwo ihe dị mgbagwoju anya, na-ahapụ ndị na-ere ahịa na enweghị ezigbo ngwaọrụ iji jikọọ ntụpọ gafee isi aka ndị ahịa. Nyochaa na-eme njikọ ahụ, na-enyere ụdị aka ịjụ ajụjụ gbasara hoc data banyere ha wee nweta azịza n'otu ntabi anya. Ndị ahịa anyị, gụnyere Lufthansa na Nature Publishing, na-eji ya ugbu a ikpughere nghọta na ịza ajụjụ n'oge ha bilitere. Onye isi oche Webtrends Joe Davis
Ewebata Webtrends Explore
Webtrends Explore na-arụ ọrụ dị ka ibe na Nchịkọta Webtrends Na-achọ, na-agbatị ikike nchịkọta data na njedebe nyocha na iji ike ad-hoc nyocha data.
Tags: ad-hoc nchịkọta akụkọnchịkọta akụkọnchịkọta nkewannukwu dataobe-ọwanjem ndị ahịamkpọpu alagbuoon-the-fly nkewankewawebtrends inyocha
Kedu ka Mgbalị Mgbasa Ozi N'èzí Na-atụle?
Ceros: Mepụta ọdịnaya mmekọrịta mara mma na-enweghị mmepe